Zizoshintsha izinto esiteshini uMzansi Wethu
USIYABONGA Vithi ongumethuli wohlelo oluthi Siza Mina nolungezinye zokuqala eziningi ezintsha ezizayo kuMzansi Wethu njengoba behlele ukuqopha izinhlelo eziningi ezifana nalezi nezenzelwe lesi siteshi kuphela ISITHOMBE: SITHUNYELWE
Nokubongwa Phenyane | March 16, 2022
KULINDELEKE ukuthi zande izinhlelo ezintsha nezisiza abantu emphakathini esiteshi esizalwa uMzansi Magic (161), uMzansi Wethu (163). Lokhu kulandela ukuthi kube nezinhlelo ezintsha eziqoshelwe isiteshi kusuka ngonyaka odlule.
AbakaM-Net baveze ukuthi ngokujwayelekile iziteshi ezizalwe ngezinye bebehlose ngazo ukuphinda izinhlelo ezisuke sezikhonjisiwe eziteshini zabo ezinkulu njengoMzansi Magic.
UShirley Adonisi ongumqondisi wezinhlelo kwaM-Net, uveze ukuthi kusuka ngonyaka odlule, bese zikhona izinhlelo ebeziqonda kuMzansi Wethu nebezingadlalanga kuMzansi Magic. Uthe lokhu bakwenze ngenjongo yokukhulisa ababukeli babo kulesi siteshi.
Uthe izihlelo okukhona kuzona i-I Blew It, Abobaba, Ubizo nezinye, ngezinye izinhlelo abaziqale ngenjongo yokuzisa kulesi siteshi.
“Sekuphele unyaka manje sibheke ekutheni sikhulise isibalo sababukeli esiteshini uMzansi Wethu, lokhu besikwenza ngokuthi siqophe izinhlelo zakuleli kuphela futhi sikhombise zona kuphela. Ekuqaleni kwalo nyaka sethule uhlelo oluthi Mntase nobeluqala ukubonakala kusona lesi siteshi nesithemba ukuthi ngokuqhubeka senza lokhu, ababukeli bethu bazozijabulela izinhlelo. Manje siphinda sethula uhlelo lokuqala oluyizinkulumo-ngxoxo oluthi Siza Mina,” kuchaza uShirley.
Uthe ngalo bahlele ukusiza izihambeli zabo, ezinezinkinga ezihlukene nezidinga kube khona ongenelelayo ukuze zithole usizo.
“Ohlelweni ngeke kube ngabantu abadinga usizo olulodwa kodwa kuzobheka izinto ezihlukene okukhona kuzona uthando, izinkinga zomndeni, izikweletu, ubungani obungasahambi kahle, izinkinga zemizi nezinkontilela emsebenzini. Sifuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi manje izinhlelo zethu zintsha futhi zikhuluma ngezinto ezenzakalayo emiphakathini yethu. Siyababongela ababukeli abakhokhela le ngxenye eyaziwa ngeDStv Access ngokuthola ithuba elifana naleli, nabazoyijabulela ngezimpelasonto,” kuchaza yena.
Uhlelo iSiza Mina lwethulwa uSiyabonga Vithi, ongusomabhizinisi, umsakazi nongaqali ukuba umethuli wezinhlelo ezifana nalolu.
Uveze ukuthi uhlelo baluqophe phambi kwezihlwele nabaqinisekisile ukuthi iyalandelwa imigomo yeCovid-19, kanti seluqalile ukukhonjiswa esiteshini njalo ngeSonto, kuMzansi Wethu (DStv Channel 163), ngo8.30 ebusuku.